गीता को सार
गीताको पृष्ठभूमि महाभारतको युद्ध नै हो । श्रीमद्भगवदगीता हिन्दू धर्मका पवित्रतम ग्रन्थहरूमा एक हो । यो ऐतिहासिक हिन्दूग्रन्थ महाभारतको भीष्म पर्वबाट लिएको एक सानो ग्रन्थ हो । यसमा १८ अध्याय छन् । यसलाई मोक्षशास्त्र पनि भनिन्छ । श्रीमद्भगवदगीता आफैमा पूर्ण शास्त्र हो ,वेद र उपनिषद् हरुको सार हो । सम्पूर्ण मानव जातिको लागी हो, गीता सम्पूर्ण देश, काल र जातीको लागी हो।
गीताको सार तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
किन व्यर्थ चिन्ता गर्छौ ?
कोदेखि व्यर्थै डराउदछौ ? तिमीलाई कसले मार्छ ?
आत्मा न जन्म लिन्छ न मर्छ । जे भयो, त्यो राम्रो भयो ।
जे हुँदैछ, त्यो राम्रै हुँदैछ । जे हुनेछ, त्यो पनि राम्रै हुनेछ ।
तिमी भूतकालको पश्चताप नगर, भविष्यको पनि चिन्ता नगर ।
वर्तमान चलिरहेको छ । तिम्रो के गएको छ र तिमी रुन्छौ ?
तिमीले के लिएर आएका थियौ र तिमीले हरायौ ?
तिमीले केही लिएर आएका थिएनौ । जे पायौ, यहीँबाट पायौ ।
जति दियौ, यहीं नै दियौ । खालि हात आएका थियौ,
खालि हात नै गयौ, जे आज तिम्रो छ,
त्यो हिजो अरु कसैको थियो, भोलि अरु कसैको हुनेछ ।
तिमी यसलाई आफ्नो सम्झेर मग्न भैरहेका छौ ।
यहीं खुसी नै तिम्रो दुःखको मूल कारण हो ।
परिवर्तन संसारको नियम हो ।
जसलाई तिमी मृत्यु सम्झन्छौ, त्यही जीवन हो ।
एक क्षणमै तिमी करोडपति बन्दछौ,
दोश्रो क्षणमा तिमी दरिद्र बन्दछौ ।
मेरो, तिम्रो, सानो, ठूलो, आप्mनो, अर्काको
भन्ने मनबाट हटाइदेऊ, अनि सबै तिम्रो हो,
तिमी सबैका हौ । तिमी आफू आफै भगवान्मा अर्पित हौ ।
जसले ईश्वरको सहारालाई जान्दछ,
त्यो डर, तिन्ता, शोकबाट सधैंका लागि मुक्त हुन्छ ।मान्छे जन्मिन्छ केहि समय यहि रहन्छ र मर्छ।त्यसैले तिमी आसक्ती रहित भएर काम गर जसले गर्दा तिमी बन्धन बाट मुक्त हुनेछौ।
यसो गर्नाले तिमीले सधैंभरि जीवन
मुक्त भएको आनन्द अनुभव गर्नेछौ ।
← के हो श्रीमद्भगवद गीता ?
गीतामा भगवान् कृष्णको वाणी →